“ကိုယ့်မှာ ရှိတာကို ပြပြီးစားချင်လို့ မော်ဒယ် ဝင်လုပ်တာ” လို့ ပြောလာတဲ့ ရွှေအိမ်စည် - Myanmar Tech News
Homepage / Celebrities News / “ကိုယ့်မှာ ရှိတာကို ပြပြီးစားချင်လို့ မော်ဒယ် ဝင်လုပ်တာ” လို့ ပြောလာတဲ့ ရွှေအိမ်စည်
ရှှအေိမစြညြ ကတော့ Miss အလှမယြ၊ မောဒြယြ တဈယောကပြါ ဆံပငြ ရှညရြှညလြေး နဲ့ ကွော့ရှငြးပှီး ကိုယြ့ကိုယကြို ယုံကှညမြှု အပှညြ့ရှိတဲ့သူမရဲ့ ဟနပြနအြမူအရာတှကေ
ပရိသတြေ တှကှား မှာ အတောြေ လးကို ရပနြေးစားပါတယြ ရှှအေိမစြညကြတော့ စကားပှော ရငလြညြး ပှငြ့ပှငြ့လငြးလငြး ပှောတတပြှီး သူမကို အမွိုးသား ပရိသတထြကြ အမွိုးသမီး ပရိသတတြှကေ ပိုမိုသဘောကအွားပေးတာကို တှေ့ရပါတယြ။
”ကိုယြ့ ရဲ့ LOOK ကို ပှပှီး စားခငွတြဲ့ အတှကြ ဒီ Modeling Industry / မောဒြယလြောက ထဲကို ဝငလြာတာလေ။ကိုယြ့မှာ ရှိတဲ့ အရာတှကေို ပှမစားရရငြ ဘာကို ပှစားရမလဲ? ကမွ ရဲ့ ရငသြားတှကေ ဘယသြူ့ကို ဘာ လုပထြားလို့လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အရမြးတှေ Feel ဖှဈပှီးတော့ လိုကရြနတြှေ မူနကှတေယြ။
တကယတြော့ ဒါကှီးက ပွောရြှှငမြှုတှပေဲ ပေးနတောပါ” လို့ အလှမယြ ၊ မောဒြယြ ၊ သရုပဆြောငြ ရှှအေိမစြညြ ကတော့ သူမရဲ့အငတြာဗွူး မှာဖှဆေိုထားတဲ့ ရုပသြံကို ရှုစားကှညြ့ပါ ။
“ကိုယ့မွှာ ရှိတာကို ပှပှီးစားခငှလွို့ မောဒွယွ ဝငလွုပတွာ” လို့ ပှောလာတဲ့ ရှှအေိမစွညွ (ရုပသွံ)ရှှအေိမစွညွ ကတော့ Miss အလှမယွ၊ မောဒွယွ တဈယောကပွါ ဆံပငွ ရှညရွှညလွေး နဲ့ ကှော့ရှငွးပှီး ကိုယ့ကွိုယကွို ယုံကှညမွှု အပှည့ရွှိတဲ့သူမရဲ့ ဟနပွနအွမူအရာတှကေ
ပရိသတွေ တှကှား မှာ အတောွေ လးကို ရပနွေးစားပါတယွ ရှှအေိမစွညကွတော့ စကားပှော ရငလွညွး ပှင့ပွှင့လွငွးလငွး ပှောတတပွှီး သူမကို အမှိုးသား ပရိသတထွကွ အမှိုးသမီး ပရိသတတွှကေ ပိုမိုသဘောကအှားပေးတာကို တှေ့ရပါတယွ။”ကိုယ့ွ ရဲ့ LOOK ကို ပှပှီး စားခငှတွဲ့ အတှကွ ဒီ Modeling Industry / မောဒွယလွောက ထဲကို ဝငလွာတာလေ။
ကိုယ့မွှာ ရှိတဲ့ အရာတှကေို ပှမစားရရငွ ဘာကို ပှစားရမလဲ? ကမှ ရဲ့ ရငသွားတှကေ ဘယသွူ့ကို ဘာ လုပထွားလို့လဲ မသိဘူး.. ဒါကို အရမွးတှေ Feel ဖှဈပှီးတော့ လိုကရွနတွှေ မူနကှတယွေ။
Previous post Zenfone7နဲ့7Pro မော်ဒယ်နှစ်မျိုးရဲ့ Specification Highlight
Next post teast